#Mourinho: Waxaan Heshiis kordhin u sameyn Doona 4 Kamid ah Xidigaha Manchester | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Mourinho: Waxaan Heshiis kordhin u sameyn Doona 4 Kamid ah Xidigaha Manchester
#Mourinho: Waxaan Heshiis kordhin u sameyn Doona 4 Kamid ah Xidigaha Manchester
Wararka ka imaanaya Magaalada Manchester ayaa sheegaya in kooxda Manchester united ay doonayaan in 4 Kamid ah Ciyaartooyda kooxdaasi ay Qandaraaska u kordhiyaan.
Daley Blind, Ander Herrera, Ashley Young iyo Juan Mata ayaa kamid ah xidigaha Old Trafford jooga ee kooxda Red Devills ay Qorsheyneyso in Qandaraas cusub ay ka hesho.
Dhamaan xidigahan 4ta ah ayaa la sheegay in heshiiska kooxda Manchester united ay kula jiraan uu ka dhimanyahay wax ka yar sanad laakiin Kooxda ayaa la sheegay in Bilaabi doonto dhawaan Qorshaha heshiiska looga kordhinayo xidigahaasi.
Sida laga soo Xiganayo Marca oo Madrid ka soo Baxa Ciyaariyahan Ander Herrera oo Manchester United ka tirsan ayaa aad loo hadalhayaa in ay dooneyso kooxda Atletico Madrid oo xidigan January dooneysa in Spain ay dib ugu celiso.
Kooxda Manchester United oo ka Duuleysa Xiisaha loo Qabo xidigaheeda safka koowaad ayaa Waxay Heshiis kordhin u sameyn doonaan Tiro xidigaha oo hada aad Muhiim uga ah Garoonka Old Trafford.